Fadeexad ka dhalatay bogga Twitter-ka ha'yadda WHO ee Itoobiya - BBC News Somali
Fadeexad ka dhalatay bogga Twitter-ka ha'yadda WHO ee Itoobiya
Bogga Twitter-ka ay ku leedahay ha'yadda caafimaadka adduunka ayaa fadeexad ka dhatalay kaddib markii mid kamid ah shaqaalaha ha'yadda uu kusoo qoray qoraal uu ku aflagaadeynayo qof shakhsi ah oo aragtidiisa ku qoray bartiisa gaarka ah.
Qofka loo jawaabay ayaa markii hore bartiisa gaarka ah ku yiri "dadka dhibaatada ka wado dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya waxaa maalgelinaysaa dowladda federaalka Itoobiya".
Wuxuu intaasi ku daray in dadkaasi ay doonayaan inay dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya ay ka huriyaan dagaal qabaa'il islamarkaasna uu qorshuhu yahay in kicinta qabaa'ilka la doonayo in xilka looga tuuro Cabdi Maxamuud Cumar.
Qof aan la magacaabin oo isticmaalay barta Twitter ee hay'adda caafimaadka Adduunka WHO xafiiskeeda Itoobiya ayaa si filanwaa ku noqotay dadka bartaas ku xiran ugu soo qoray hadal qadaf ku ah qofkii aragtidiisa qoray.
"Beenlow! Si fiican ayaad u ogsoon tahay cidda malgelisa ciyaal suuqa. Xaqna uma lihid in aad u nisbayso xukuumadda federaalka adigoo xigasho dhex galinaya" ayaa lagu qoray barta WHO Ethiopia ay ku leedahay Twitter.
Qoraalkan ha'yadda WHO wuxuu u horseeday in lagu eedeeyo inay faraha la gashay siyaasadda dalka Itoobiya.
Ha'yadda caafimaadka adduunka ayaa ka qoomamaysay qoraalkan oo ay ku sheegtay inuu ka dambeeyay qof kamid ah shaqaalaheeda oo fikraddiisa ku cabbiray.
Ugu dambayn ha'yadda caafimaadka adduunka waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha siyaasadda.